E-commerce Chigadzirwa Ongororo: 7 Zvikonzero Nei Wongororo dzepamhepo Dzakakosha Kune Rako Brand | Martech Zone
E-commerce Chigadzirwa Ongororo: 7 Zvikonzero Nei Ongororo dzepamhepo Zvakakosha Kune Rako Brand
Muvhuro, Ndira 14, 2019 China, May 7, 2020 Juliette Anderson
Mumwe anogona kunge akacherekedza kuti iri kuwedzera sei kuwanda kumabhizinesi, kunyanya kune avo vari e-commerce chikamu, kusanganisira kuongororwa pawebhusaiti dzavo. Iyi haisi nyaya yemafashoni, asi budiriro yakaratidza kuve inoshanda zvakanyanya mukuwana kuvimba kwevatengi.
For e-commerce mabhizinesi, zvakakosha kuhwina kuvimba kwevatengi, kunyanya vekutanga-nguva, sezvo pasina nzira yekuti vaone zvigadzirwa mune zvazviri. Vatengi vazhinji vanozeza kutenga kubva kuzvitoro zvidiki zvepamhepo sezvo vachiita kunge vasina kuvimbika kana vachienzaniswa nevatambi vakuru.
Chimwe chezvishandiso zviri kubatsira kugadzirisa izvi kuongorora kwepamhepo, uye zvinotevera zvimwe zvezvikonzero zvikonzero nei uchifanira kuzviita pane yako saiti:
Nei wongororo dzepamhepo dzakakosha kune yako brand
Ongororo dzepamhepo kutyaira kutenga - Chikonzero chekutanga nei zvichikosha kuti mhando yako ive ne kuongorora kwepamhepondeyekuti inobatsira vanhu kutenga. Zvekare, izvi zvinonyanya kudikanwa kune vatengi-venguva yekutanga vatengi sezvo vasina ruzivo rwemberi nebhizinesi rako. Sezvo wongororo dzepamhepo dzichisimudzira humbowo hwemagariro, uye sezvo ongororo dzepamhepo dzinobva kune vamwe vatengi, vatengi vatsva vanowanzozvifunga nekutenga. Chekutanga-nguva vatengi vanovimba zvakanyanya nemhinduro kubva kune vatengi vane ruzivo newe, uye kana mhinduro yacho ichikurudzira zvakakwana, vatengi vako venguva yekutanga vanogona kupedzisa kutenga kwavo.
Ongororo dzepamhepo dzinokuita iwe uve visible - Kuongorora kwepamhepo zvirimo mune yayo yega. Zvemukati ichiri chimwe chezvinhu zvakakosha mukutsvagisa injini, nekudaro kuve nezviri mukati mefomu reongororo dzepamhepo kunogona kubatsira kuti zita rako rionekwe. Izvo zvakanaka nezvazvo ndezvekuti zvinouya kubva kune ako vatengi saka iwe haufanire kushandisa kunyange yakatonyanya kushanda munzvimbo ino. Pamwe chinetso chete pano chiri kukurudzira vatengi vako kuti vape mhinduro yavo, uye vachitarisira kuti vanopa dzakanaka.
Wongororo dzepamhepo dzinoita kuti utaridzike sewakavimbikaPamberi pekukosha kwekuongororwa kwepamhepo ndeyekuti inosimudzira kuvimbika kwechiratidzo chako. Izvo chaizvo chaizvo kuti zvakaoma sei kuwana kuvimba kwevatangi-venguva yekutanga vatengi, kunyanya kana chako hachizi chakakurumbira. Nekuve nekutarisisa pamhepo, urikushanda kuti uvandudze pakuvimbika kwechiratidzo chako. Ita shuwa kuti iwe unoita zvaunogona kuti uwane zvirinani kune rako bhizinesi mune zvese, zvakare kuwedzera yepamusoro zvigadzirwa zvigadzirwauye zvinopihwa nekuti zvidzidzo zvakaratidza kuti zviyero zvakaderera pane nyeredzi ina zvinokanganisa sei bhizinesi uye mukana wechigadzirwa wekukunda kuvimba kwevatengi venguva yemberi. Asi usambo chengetedza mamakisi ako - izvi hazvina hunhu, uye haufanire kutora nzira iyi.
Ongororo dzepamhepo dzinowedzera hurukuro pamusoro pako - Chimwe chinhu chikuru pamusoro peongororo dzepamhepo ndechekuti zvinobatsira kuparadzira izwi rechiratidzo chako. Ongororo dzakanaka dzinoitwa nevatengi, kunyanya kana dzikaonekwa muwebsite yako, kurudzira vatengi ava kuti vagovane navo kumasaiti avo, zvichibvumira kuti zita rako riende kusvika pazvinotumirwa izvi. Saka ita nepaunogona napo kuratidza yakanakisa mhinduro yevatengi, uye dzidzira kupindura kune izvi zvinokanganisa zvakare. Zvingave zvakare zvakanaka kana yako kuyedza kuratidza vatengi mhinduro inopfuura yako saiti. Zviite pane yako yemagariro midhiya yekushambadzira chiteshi. Nenzira iyi, zvingave zvakatonyanya kusununguka kuti vatengi vako vagovane izvi.
Ongororo dzepamhepo dziri kuwedzera kukosha pakuita sarudzo - Kunzwisisa kukosha kwe online ongororo, iwe unosungirwa kuona kuti inofanirwa kuve chikamu cheyako nzira yekutengesa. Izvo zvinonyanya kukosha kupfuura nakare kese kuti iwe uwane izvi paunenge uchigadzira mishandirapamwe yako. Iwe unofanirwa kubata wongororo dzepamhepo semushandirapamwe uri woga, uchiuya nemahurongwa akasiyana anovavarira kusimudzira kugona kwako kuwana mhinduro yakanaka, uye kuwedzera mhedzisiro. Pazvinogoneka, zvakare edza kuzvibatanidza mune mamwe makwikwi. Edza kuuya neakanyanya-kuita gimmicks senge makwikwi uko vatengi vako vachakupa iwe yavo yakanaka mhinduro pane zvigadzirwa zvako. Iwe unosungirwa kuwana yakawanda yakawanda yakanaka mhinduro nenzira iyi.
Wongororo dzepamhepo dzine chekuita nekutengesa - Kunyangwe zvataurwa kuti online ongororo inokanganisa kutenga, uye nekudaro kutengesa kunofanira kuve kwakakanganiswa, kunoita zvinopfuura izvozvo chete wedzera kutengesa kwako. Wongororo dzepamhepo haingowine vatengi vekutanga-nguva, asi zvakare kuvandudza pane brand kuvimbika, uchibvumira vatengi vako kuti varambe vachiita bhizinesi newe. Uye chero bedzi iwe uchiramba uchipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi, iwe ucharamba uchiwana mhinduro yakanaka, uye kutenderera kunoenderera. Izvo zvakakosha kuti iwe uenderane nekuzvipira kwako kune mhando. Nekuita izvi, iwe une chokwadi chekusimudzira yako kutengesa uchienderera.
Ongororo dzepamhepo dzinokupa yakazaruka mutsara kune vatengi - Chekupedzisira, online ongororo dzinoshanda senzira yekutaurirana nevatengi vako. Uye hunhu hwemazuva ano hunoda kuti mabhizinesi apindure. Izvi hazvinei nekuti mhinduro yacho yakanaka here kana kuti yakaipa. Kunyangwe iri inofadza kwazvo uye yakapusa kupindura kune yakanaka mhinduro, iwe unodawo kupindura kune asina kunaka. Iwe unofanirwa kuratidza kune vamwe vatengi vako kuti iwe unozogona sei kugadzirisa chero yakaipa mhinduro iyo yako vatengi vanogona kupa. Zvekare, iwe haubvumidzwe kudzora mhinduro inowana bhizinesi rako. Izvo iwe zvaunofanirwa kuita kubata navo musoro-on. Iwe unofanirwa kuratidza kuti rako bhizinesi rakabata zvakasimba mamiriro acho.
Shanda pane ako ongororo epamhepo kusimudzira yako mhando
Icho chikonzero chiri pamusoro chinotsanangura zvakajeka nei zvichikosha kune bhizinesi rako kushandisa ongororo pamhepo. Kana iwe usati uine izvozvi, ita shuwa kuti unotanga izvozvi. Kana iwe uchitoita, ita shuwa kuti iwe unoshanda pairi zvakanyanya kuitira kuti iwe ugone kuwedzera mabhenefiti aunogona kuwana kubva mairi. Kuve nekutarisa pamhepo kune rako bhizinesi kwakakosha. Izvi hazvitaurirane saka ita shuwa kuti iwe unoshandisa iko kune kwese kuzere kugona.
Tags: vatengikuita zvisarudzoe-zvokutengeseranaOngororo dzepamhepo
Juliette Anderson ndeye Outreach Nharaunda Nyanzvi ye e-commerce yekuzadzisa kambani iyo inoshanda mukudyidzana nevatengesi vepamhepo vane avhareji pasuru huremu hwe5+ mapaundi kana kupfuura. Iye anoshanda ruoko-mu-ruoko ne e-commerce zvitoro kuti awane zvakanakisa kutengesa kwemakore mana atove. Hunyanzvi hwake huripo mukushambadzira midhiya yenhau uye kukwidziridzwa kwakabhadharwa.
Maitiro Akangwara Ekutumira Email Kujekesa Kunotsanangurwa